केन्द्रीय सत्ता सयरमा फोरम सकारात्मक, प्रदेश–२ मा गठबन्धन फेरिने संकेत – Mission Khabar
केन्द्रीय सत्ता सयरमा फोरम सकारात्मक, प्रदेश–२ मा गठबन्धन फेरिने संकेत
मिसन खबर १४ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०५:१६
काठमाडौं, जेठ । संविधान संशोधनको अडानबाट पछि नहटेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको छ । संविधान संसोधनका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संसफो नेपाल सकारात्मक भएपछि फोरमको सत्ता सयर सहज हुन लागेको हो ।
फोरम सरकारमा सहभागी भए प्रदेश २ को सत्ता समर्थनबाट बाहिरिएको नेकपा आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार गर्न तयार हुने र गठबन्धन नै फेरबदल हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । केन्द्रीय सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई फोरमले समर्थन गरिसकेको छ । पछिल्लो छलफल सकारात्मक बनेपछि फोरम सत्तारुढ दलसँग नजिक देखिएको हो ।
केन्द्र र प्रदेशमा दुई फरकखाले राजनीतिक घटनाक्रम देखिएपनि यो गठजोडलाई नेकपा र फोरमको गठबन्धनसहित केन्द्र र प्रादेशिक सरकार बनाउने उदेश्य केन्द्रित भनिएको छ । संविधा संसोधनको मुद्धा उठान गरेर निरन्तर संघर्षमा रहेको फोरम नेपाल कहिले सरकारमा सहभागी हुन्छ ? को पुग्छन केन्द्रीय सत्तामा ? यो भने खुलिसकेको छैन ।